Kuphi ubuxoki i-SEO nkcazo, ucinge nge-Search Engine Marketing?
Ndiyakwazi ukuva iimpendulo ezingenangqondo ezivela kwiinkampani ezininzi zezoqoqosho kunye nabaphumeleleyo, abaphathi abaneengqondi nabahlakaniphile. Bonke bakhononda ngokudideka kunye nemigqaliselo ye-Search Engine Marketing (SEM) kunye neenkcukacha ezaneleyo ze-SEO. Enyanisweni, zombini iingcamango zikhulu kwaye ngoko ke zibizwa ngokubhekiseleleke ngabashishini bezoshishino. Masibhekane nayo - ininzi yabo ingaphezulu kakhulu ekubeni ingqinisiso echanekileyo, nje ukuzisa ukudideka kunoko.
Masenze izinto zicacise ekugqibeleni - logiciel gestion formation entreprise. Ewe, ukuSebenza kweeNjini zoPhando (SEO) kunye ne-Search Engine Marketing (SEM) ngokuqinisekileyo zibhekiswe kwiinjinjini zokukhangela. Kodwa bazenza ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo, ubuncinane ngokusebenzisa amagama ambalwa ahlukeneyo. Ndiyathetha, ukuThengisa kunye nokuSebenza kwakuneenkcazo ezibanzi kwaye zibanzi, kungekhona ukuthetha isicelo sabo jikelele. Ndicetyiswa ukuba ndikhangele uludwe olufutshane lwezona zinto ziphambili phakathi kwazo, ukufumana ukuqonda okufanelekileyo kwe-SEM, ukuzaliswa ngokupheleleyo ngokucacileyo nge-SEO.
Masibe nomfanekiso ongaqhelekanga wokubona umahluko ngokukhawuleza. Cinga ukuba i-Digital Marketing yakho iyimoto. Ukusebenza ngokuchanekileyo, isithuthi sakho kufuneka sinyamekele kakuhle injini yayo, ngokuhambelanayo nokugcina, umzekelo, ukunikezelwa kwamafutha rhoqo. Ukuthatha ezi zinto ziza kuba ziimpawu zokuqala njengesiqalo sokuqala, sinokuqhubeka ngokuthelekiswa okulula. Ewe, ukuthelekiswa kwam kunesibindi kukude naluphi na ukujonga ngokuchanekileyo, kodwa kufuneka bayenze, ubuncinane ngoku.
Ukugcinwa kweenjini injini kuya kufana nenkqubo yoPhando lweeNjini zoPhando. Iquka imiba eyahlukileyo, njengokujonga ingcinezelo, ioli, amanqanaba emanzini, kunye nokubandakanya eminye imisebenzi ehlukeneyo ukuze kugcinwe imoto. Ukusebenza kangcono, unokuhlala ufumana ezinye izinto, okanye utshintshe izinto ezikhoyo. Ukwenza njalo, uya kufezekisa amava oqhubela phambili ngokuqhuba yonke imihla. Yiloo nto ndiyakholelwa ukuba inkcazelo ye-SEO elula. Ukwenza lo mfanekiso uqiniseke ngakumbi, sinokuwuqhathanisa ngokulula kunye nenxalenye engathandekiyo yobunini bezimoto ezizondwayo yingxenye yengonyama yabashayeli, ndiya kuvuma.
Ngakolunye uhlangothi, ukuThengiswa kweeNjini zophando kunokuthelekiswa nesidingo esingenakukhunjulwa nesigqithisekayo, faka igesi esitsha kwisitokhali sothuthi sakho. Ukuthatha isalathiso sangaphambili kwimisebenzi yesondlo ebiza ngokulinganayo kwenkcazo ye-SEO elula, kubonakala ukuba phantse nayiphi na imisebenzi yokugcina nokulungisa inganciphisa isisiseko esithile. Ukwenza njalo (e. g. , ukuphatha iwebhusayithi yakho kuphela ngeenzame zokugqibela ze-SEO), uya kukwazi ukuchasa iindleko ezininzi kakhulu kwixesha elide, kodwa gcina isithuthi sakho sisebenza, ubuncinane kwinqanaba elisezantsi. Ngakolunye uhlangothi, ukuzaliswa kwamafutha kwi-SMM, ngakwesinye icala, kusekho imfuneko, ngoko ke kusele indlela kuphela yokusebenzisa imoto yakho, ukuqhuba indlela yakho apho ufuna khona kwaye xa ufuna yonke ixesha.
Bobabini i-SEO kunye ne-SEM basebenza kwintsimi enye. Ndithetha ukuzisa ezinye iindwendwe kwiqonga lakho le-intanethi. Ngenkcazo ye-SEO inkcazo, ukuqhuba i-website yezoshishino enokulungiswa kakuhle kunye nokugcinwa kwintengiso kuza kukuzisa umgangatho ophezulu wendlela. Kutyalo-mali olude kunye nobunzima, oluqinisekisa ukuhamba kwakho okuzinzile kwabathengi banene, kwaye ngoko ke imali. I-SEM ukubheja kwi-search pay, ngakwesinye icala, kufuneka ihlale isondliwa ngemali. Iqhuba i-traffic yakho ngokukhawuleza, ngoko ibonisa iziphumo ezikhawulezileyo, nangona kunjalo.